साहित्य क्षेत्रमा लागेका श्रष्टाहरुको सम्मानका लागि साहित्य महोत्सव : कोषाध्यक्ष राई (भिडियो सहित) - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द १९ भाद्र २०७६, बिहीबार १५:२९ 543 पटक हेरिएको
सुरेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष इलाम साहित्य समाज
इलाम : इलाममा आगामी असोज ३ र ४ गते इलाम साहित्य महोत्सव २०७६ को आयोजना हुँदैछ । इलाम साहित्य समाज इलामको आयोजनामा हुन लागेका महोत्सवको तयारी सुरु भएको छ । पर्यटनका लागि साहित्य भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल र भारतका १ सय ७० बढी ख्यातीप्राप्त साहित्यकारहरुको सहभागिता रहने आयोजकको दावी छ । सोही महोत्सवको तयारी सन्दर्भमा नयाँ बुलन्द डटकमले आयोजक इलाम साहित्य समाजका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र राईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
साहित्यिक महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । यो महोत्सव व केका लागि ?
यो महोत्सव साहित्यिक गुलजारका लागि हो । इलाममा सुस्ताएको साहित्यिक गतिविधि, फेस्टिवल मार्फत सुदुर पूर्वमा पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुर्याउन इलाम साहित्य महोत्सव २०७६ को आयोजना गर्न लागिएको हो ।
तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
पाहुनाहरुलाई निम्तो पठाइ सकियो । नेपाल र भारतबाट १ सय ७० जना विभिन्न विषयमा दखल भएका पाहुनाहरुलाई हवाई टिकट र गाडीको बन्दोबस्त गरिसकेका छांै । पाहुनाहरुलाई हस्पिटालिटीको प्रबन्ध गर्दैछौं । त्यसका लागि होटल एसोसियसन इलामले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ । आर्थिक संकलन र काम तीब्र रुपमा भईरहेको छ । दाताहरुबाट आश्वसन अनुसार हामी धाइरहेका छौं ।
महोत्सवमा कति लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीले महोत्सव सम्पन्न गर्न कूल २५ लाख लाग्ने अनुमान गरेका छौं ।
त्यत्रो खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
इलाम जिल्लाका स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्वयम् आयोजक हुन् । प्रदेश सरकार तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० पनि हाम्रा दाताहरु हुन् । रमपम तयारी चाउचाउले मुख्य प्रायोजक गर्ने लगभग निश्चित भईसकेको छ । मेची पहाडी पर्यटन वोर्डले सहप्रायोजक गर्नेछ । त्यसैगरी स्थानीय व्यापारी तथा निर्माण व्यवसायीहरुको साथ सहयोग मार्फत हाम्रो खर्च जुट्नेछ ।
महोत्सवमा केके हुनेछन् र महोत्सवमा वक्ताका रुपमा कोको आउँदैछन् ?
महोत्सवमा साहित्य र पर्यटनका सम्बन्धमा दुई दिसम्म मन्थन हुनेछ । पहिलो दिन मुख्य सम्भाषण विष्यमा सरुभक्त, सत्ता की प्रतिपक्ष विषयमा श्रवण मुकारुङ, मोजिला जोशी, र मनु मञ्जिल, अ मा अल्झेको इलाम विषयमा युद्धप्रसाद वैद्य, महेश बस्नेत र विष्णु निष्ठुरी, मानक माथि प्रश्न विषयमा राजन मुकारुङ, संजीव उप्रेती र उज्ज्वल प्रसाई, अधिकारको पेवा विषयमा जेवी विश्वकर्मा, सीमा आभास र कृष्ण धरावासी तथा साहित्य र राजनीति विषयमा प्रदिप गिरी विभिन्न शीर्षकमा वक्ताका रुपमा रहनेछन् । साँझ काव्य साँझ रहनेछ । त्यसमा विभिन्न साहित्यकारहरुको साहित्य वाचन हुनेछ ।
त्यसैगरी दोश्रो दिन वक्ताका रुपमा पछिल्लो साहित्यिक आन्दोलन विषयमा उन्मुक्त पुस्ता, फरक आयाम र कुकुर कविता, करोड क्लब र अफवाह विषयमा दयाहाङ राई, प्रकाश आङदेम्बे र ब्रजेस, नेपाली साहित्यमा मुन्धुम मन्दुम विषयमा भूपाल राई र धर्मेन्द्र विक्रम नेम्बाङ, गीतको दुख विषयमा गणेश रसिक, कोमल निरौला र शुभ मुकारुङ, किन बिक्न छोड्यो विषयमा भूपिन, प्रकाश बुढाथोकी र विना थिङ, समृद्धि कस्तो र कसका लागि विषयमा विश्वप्रकाश शर्मा र योगेश भट्टराई तथा पर्यटनको आयाम विषयमा आङफूरी शेर्पा र केशव धौराली रहनेछन् ।
महोत्सव सकिएपछि समग्र जिल्लाबासीले के पाउँछन् त ?
इलाम तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाको भविष्य पर्यटनमा छ । र देशको ठुलै अर्थतन्त्र धान्ने एकमात्र संम्भावना पर्यटन हो । यस साहित्यिक महोत्सवले पर्यटनलाई एक्सप्लोर गर्ने छ । नेपाल र भारतमा साहित्यकारहरुका कलमहरुद्वारा उजागार हुने यो ठाउँ देश विदेशमा पु¥याइनेछ । त्यसैगरी साहित्यिक कोलाजको शुरुवात हुनेछ । वार्षिक रुपमा गरिने यो महोत्सवले नेपालको राष्ट्रिय क्यालेण्डरमा पर्ने ठूलो कार्यक्रम हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
साहित्यक क्षेत्रको विकासमा चाँही कस्तो योगदान गर्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
यो महोत्सव साहित्य क्षेत्रमा लाग्नु भएको श्रष्टाहरुलाई सम्मान पनि हो । उहाँहका रचनालाई आम नागरिक, विश्व साहित्यिक मञ्चमा पु¥याउन भविष्यमा पनि देशकै महत्वाकांक्षी महोत्सव हुनेछ । भारतमा सालैपिच्छे हुने जयपुर लिटरेरी फेस्टिभल जस्तै भव्य बनाउने छौ । आगामी दिनहरुमा श्रष्टाहरुलाई सम्मानार्थ पुरस्कार पनि स्थापना गर्ने सोंच छ ।
साहित्यमा प्रयोग, छलफल र गतिविधि द्धारा भविष्यमा नेपाली साहित्यलाई विश्वमा फैलाउने आशा छ । अत ः तपाईहरुको साथ, सहयोग र सहकार्यका लागि धन्यवाद । यो विशुद्ध निस्वार्र्थ सामाजिक कार्यक्रम हो । तपाईहरु सवैलाई हातेमालो गरिदिन आयोजक इलाम साहित्य समाजको तर्फबाट सादर अनुरोध गर्दछौं ।
अन्तरवार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस् :